4.6.20 MCS COVID-19 अपडेट – मेसन सिटी स्कूलहरू COVID-१ Head मुख्यालय
4.6.20 MCS COVID-19 अपडेट
हामी एक क्षण लिन र यो COVID-१ event घटना अहिले कत्ति चुनौतीपूर्ण हो पहिचान गर्न चाहन्छौं. त्यहाँ धेरै अज्ञातहरू छन्, र हरेक दिन नयाँ जानकारी ल्याउँछ.
हेर्नुहोस् यो भिडियो हाम्रो कर्मचारी र परिवार साझा कि हामी शारीरिक रूपमा एक साथ हुन सक्नुहुन्न, हामी अझै यसमा छौं. र हामी अझै पनि मेसन छौं.
आज बेलुका २ बजे सम्म, त्यहाँ मेसन सिटी स्कूलहरूमा COVID-19 को कुनै पुष्टि घटनाहरू छैनन्, र 4,450 ओहायो मा पुष्टि मामलाहरु. तल हाम्रा परिवारहरू र जनताबाट साझा प्रश्नहरूको जवाफ दिइन्छ।
मैले जूम जस्ता केही अनलाइन प्लेटफर्महरूको बारेमा चीजहरूको बारेमा पढेको छु. विद्यार्थीले अनलाइन हुँदा कसरी मेसनले उनीहरूको सुरक्षा गर्छ?
मेसन सिटी स्कूलहरूले हाम्रो स्टाफ र विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र गोपनीयतालाई गम्भीरताका साथ लिन्छ. हालसालै, असंख्य जूम बैठकहरू अनुपयुक्त सामग्री द्वारा अपहरण गरीएको छ. हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूको साथ जुम प्रयोग नगर्ने छनौट गरेका छौं. शिक्षकहरूले लाइभ भिडियो कल मार्फत जडान गर्न अवसरहरू प्रस्ताव गर्न सक्दछन् (उदाहरण को लागी, गुगल मीट मार्फत) तर ती आवश्यक पर्दैन. शिक्षकहरूले एसिन्क्रोनस भिडियो-आधारित टेक्नोलोजी पनि प्रयोग गर्न सक्दछन्, जस्तै फ्लिपग्रिड र सीसव, विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्न. हाम्रो कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले गुगललाई दैनिक आधारमा प्रयोग गर्छन्, र यस समयावधिको अवधिमा हामी बारम्बार प्रयोग हुने उपकरणहरू र सफ्टवेयरमा नयाँ उपकरणहरू थप्दा भारी बोक्छौं. हामीलाई थाहा छ कि भिडियो कन्फरेन्सिंगको लागि कुनै सही उपकरण छैन, र वयस्कको रूपमा हामीसँग कडा प्राथमिकताहरू छन्।
कसरी आमाबाबुले बच्चाहरूलाई अनलाइन सुरक्षित राख्न सक्दछन्?
हाम्रो नवीन प्रणाली विभाग एक विकसित गरेको छ अनलाइन अभिभावक पाठ्यक्रम तपाइँको बच्चा लाई अनलाइन सुरक्षित राख्न को लागी. पाठ्यक्रमले तपाइँको बच्चालाई सुरक्षित राख्न रणनीतिहरू समावेश गर्दछ जब तिनीहरू इन्टरनेटमा जडित छन्, समय सीमा सेट गर्न र विशिष्ट साइटहरू रोक्न उपलब्ध हार्डवेयर विकल्पहरू साझा गर्दै, र तपाइँको बच्चालाई रक्षा गर्न सफ्टवेयर विकल्पहरू प्रदान गर्दै।
मैले सोचें कि हामी शुक्रवार एउटा निजी शिक्षण दिनको लागि स्कूलबाट छुट्टि्यौं. अहिले के भइरहेको छ?
किनभने हामीले धेरै अवरोध भोग्नुपर्‍यो र वसन्त ब्रेकको अघि र पछिको व्यक्तिगत लर्निंग दिनहरूको एक हप्ता हामीले रिमोट लर्नि to्गमा सार्दा।, हामीले निर्धारण गरेका छौं कि कर्मचारीहरू र परिवारहरूको लागि यो राम्रो हुनेछ विद्यार्थीहरू अर्को दिन उनीहरूको नयाँ स्थापना भएको दिनचर्या हराउँदैनन्. भनिएको भइरहेको छ, हाम्रो रिमोट लर्निंग अनुभव योजना एसिन्क्रोनस सिकाई हो, र विद्यार्थीहरूलाई तोकिएको दिन वा समयमा तोकिएको कार्य पूरा गर्न आवश्यक पर्दैन. यदि तपाईंको परिवारलाई थप लचिलोपन चाहिन्छ, कृपया तपाइँको बच्चाको शिक्षकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्(s).
एमसीएस कामदारहरूको लागि मास्क बनाउँदै: सीडीसीले अब अमेरिकीहरूलाई नयाँ कोरोनाभाइरसको रोकथाम गर्न सहयोग पुर्‍याउँदा स्वेच्छाले आधारभूत कपडा वा फेब्रिक फेस मास्क लगाउन सल्लाह दिइरहेको छ।. यदि तपाईं एक धूर्त व्यक्ति हुनुहुन्छ र मेसन सिटी स्कूल कामदारहरूको लागि कपडाको मास्क बनाउन सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, हामी तिनीहरूलाई लिन चाहन्छौं! यहाँ मास्क कसरी बनाउने सिक्नुहोस्.
हाम्रो धूमकेतुलाई समर्थन गर्न तपाईले गर्नु भएको सबैको लागि धन्यवाद!